बालिकाको टाउकोमा प्रेसर कुकर फ’सेको डाक्टरले पनि नि’काल्न सकेनन्, पछि बा’ध्य भएर यसो गरि,यो ! – List Khabar
Home / समाचार / बालिकाको टाउकोमा प्रेसर कुकर फ’सेको डाक्टरले पनि नि’काल्न सकेनन्, पछि बा’ध्य भएर यसो गरि,यो !
admin February 11, 2022 समाचार Leaveacomment 73 Views
एजेन्सी। भारत गुजरात स्थित भावनगरमा एक बालिका घरमा खेल्दै थिइन्।घरमा भएको प्रेसर कुकरसँग खेल्दा-खेल्दै यस्तो भयो की उनले आफ्नो टाउको कुकरमा घुसाइन। घरमा उनका परिवारजनले बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अनेक प्रयास गरे।
उनीहरु लगाएका अनेक जुक्ति केहिले पनि कम गरेनन्। जसपश्चात उनीहरु बालिकालाई अस्पताल लैजान बाध्य भए।त्यहाँ डाक्टरहरुले पनि कुकरबाट बालिकाको टाउको निकाले प्रयास गरे। तर, उनीहरु पनि सफल हुन सकेनन्।
बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अर्थोपेडिकदेखि बाल चिकित्सा विभागका डाक्टरहरु सबैले आफ्नो-आफ्नो तरिका अपनाए, सफलता भने कसैले पनि पाउन सकेनन्।आफूहरुले नसक्ने देखेपछि उनीहरुले भाँडा पसलको मान्छेलाई बोलाएर कुकर काट्न लगाए। सावधानीपूर्वक कुकर काटेपश्चात मात्रै बालिकाको टाउको निकालियो।
Next लगातार बढ्दै सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो